Tahaka ny inona ny soavaly volondavenona? | Soavaly Noti
Monica sanchez | | soavaly
Ny soavaly volondavenona dia mazàna misarika ny saina betsaka noho ireo loko mahaliana amin'ny volony, fa izy ireo koa dia iray amin'ireo izay tsy maintsy mitandrina tsara mba hisorohana izany rahampitso, rehefa folo taona izy ireo na mihoatra, dia voan'ny homamiadana.
Ka raha vao nahazo iray ianao dia te hahafantatra, tsy hoe maninona no misy izany, fa koa inona ny fepetra tokony hataonao mba tsy hihamalemy ny fahasalamanao amin'ny ho avy, amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko anao izany rehetra izany sy Bebe kokoa.
1 Tahaka ny inona ny soavaly volondavenona?
2 Karazana soavaly volondavenona
2.1 Thrush throws
2.2 Thrushes maizina nanakodia
2.3 Thrush mihorona maivana
2.4 Thrush Rolled Vinous
2.5 Muscat thrushes sy atruitats
2.6 Thrushes fotsy na fotsy
3 Fikarakarana manokana inona no ilain'izy ireo?
4 Ahoana ny fanesorana tasy amin'ny soavaly volondavenona?
Tahaka ny inona ny soavaly volondavenona?
Ny soavaly volondavenona dia voatonona anarana satria manana volo izay mampahatsiahy an'ireo vorona fotsy ny lokony. Midika izany fa manana volo fotsy misy tasy fotsy izay mety amin'ny endriny rehetra. Matetika izy ireo dia teraka miaraka amin'ny loko mainty misy volo fotsy, fa rehefa mihalehibe izy ireo dia manjary maivana kokoa ary mety ho lasa fotsy na fotsy tanteraka. Ho fanampin'izany, mazàna dia manana rambony misy volo kely izy ireo.
Karazana soavaly volondavenona
Miankina amin'ny dingana misy ny pigmentation misy azy io, azontsika atao ny milaza fa misy karazany maro:
Miaraka amin'ny fiovan'ny volo voalohany misy volo fotsy miseho, be dia be ao an-doha. Ny an'ny mana sy ny rambony dia fotsy kokoa na mainty noho ireo ao amin'ny vatana.
Thrushes maizina nanakodia
Rehefa mandeha ny fotoana ary milatsaka ny volo, mihombo hatrany ny volo fotsy, mamorona teboka fotsy kely amin'ny palitao amin'ny tany.
Thrush mihorona maivana
Miaraka amin'ny fisehoan'ny volo fotsy bebe kokoa, teboka fotsy mitombo habe mitambatra mihitsy aza. Ireo soavaly ireo dia mazava kokoa amin'ny mason'ny mitanjaka, mamela ireo faritra volo mainty hitokana.
Thrush Rolled Vinous
Ilay soavaly volondavenona dia biby iray izay misy teboka volontany manerana ny vatana mitambatra tsy mamela afa-tsy toerana misy loko maivana kokoa. Ny rambony dia mavomavo na volontany mainty.
Muscat thrushes sy atruitats
Soavaly izay miaina ny nitombo ny fisehoan'ny volo fotsy ary nihena ny volo mainty. Raha mainty na volontsôkôlà ny akanjo ifotony, dia hoentin'ny muscat izy io, ary raha chestnut na sorrel, tordos atruitats na antsoina koa hoe soavaly volondavenona piebald.
Thrushes fotsy na fotsy
Sary - Artencordoba.com
Ity no dingana farany amin'ny soavaly volondavenona: rehefa mivadika fotsy tanteraka na fotsy ny palitao. Na izany aza, tokony ho fantatra fa ny hoditra sy ny mason'ireo biby ireo dia tsy miova loko.
Fikarakarana manokana inona no ilain'izy ireo?
Ho fanampin'izay ilain'ny soavaly rehetra (sakafo tsara, fanatanjahan-tena, fitiavana ary faharetana), tena ilaina tokoa ny misoroka ny fahazoan'ny masoandro mivantana mandritra ny ora afovoan'ny andro. Fa maninona Satria ny 75% amin'ireo soavaly ireo dia voan'ny melanoma izay mety hivadika hanimba.
Melanoma dia karazana homamiadana izay amin'ny soavaly volondavenona dia miseho amin'ny fisehoan'ny teboka mainty eo ambanin'ny rambony sy amin'ireo faritra izay kely na tsy misy volo. Amin'ny tranga maivana dia tsaboina amin'ny menaka manitra sy antibiotika izy io, fa amin'ny tranga henjana dia hivadika fery mandoaka ny ra sy ny nono ireo toerana ireo ary azo esorina amin'ny fandidiana ihany.
Ahoana ny fanesorana tasy amin'ny soavaly volondavenona?
Mahafatifaty ilay soavaly volondavenona, fa tsy maintsy diovin'ilay mpiambina azy io matetika mba hahatonga azy ho toy izao. Raha ny marina, ny teboka mavo dia tena mahazatra; Tsy mahagaga raha vokatry ny harafesina sy ny zezika. Fa, Ahoana no fanesorana azy ireo?
Ho an'izay Manoro hevitra izahay hanaraka an'io tsikelikely:
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manala ireo tasy amin'ny shampoo manokana ho an'ny tasy mavo na volontany, toy ny Stain Remover.
Aorian'izay dia alohanay amin'ny rano mafana ilay tasy ary borosy amin'ny karazana mite.
Avy eo, avelantsika hiasa mandritra ny roa minitra ny vokatra ary hosasana amin'ny rano.
Manaraka izany, manasa ilay biby izahay amin'ny alàlan'ny rano mafana 4 litatra sy shampoo Blue amin'ny 1/4 hanatsarana ny palitao volondavenona.
Ny dingana manaraka dia, raha te-hanafotsy ny faritra manokana isika, asio whitening Led & body izay notampohan-drano ao anaty rano ary avelao hiasa mandritra ny minitra vitsy.
Ahoana ny hevitrao momba an'ity lahatsoratra ity? 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Soavaly volondavenona